Fikiro ilay tontolo miteny-manomeza ho an’i Global Voices! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Desambra 2008 20:46 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Português, Español, Italiano, македонски, عربي, polski, srpski, English
Vao nanokatra ny takelaka an-tserasera hanaovana fanampiana izahay izao ary manantena fa mba heverinao ny hanohana ara-bola ny Global Voices. Efa misy tokoa ny mpanohana ara-bola anay miezaka ny mamonjy aanay araka izay tratrany, mila fanohanana bebe kokoa sy avy amin'ny isam-batan'olona izahay ahafahanay hahaleo tena, afaka ary manam-paharetana, indrindra amin'izao fotoanan'ny fahasarotana izao.
Ity olana ity no manamarika ny faha-efataona nivorian'ny mpamaham-bolongana avy amin'ny lafy valon'izao tontolo izao tao amin'ny Harvard University niresaka ny ahafahan'ny bolongana (bilaogy, blaogy) sy ny haitao vaovao manatsara ny fifampiresahana manerantany sy miaro ny fanehoan-kevitra politika, niteraka ny fiforonan'ny Global Voices. Ankehitriny efa manana firaisankinan'olona mpanolotena hanoratra sy handika teny mihoatra ny 150 izahay ary manana toniam-paritra sy tonian'ny fandikanteny mahaleo tena mihoatra ny 20, ary iray amin'ireo sehatra fampitam-baovao vaovao ifandrimbonana avy amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana.
Ny fanampianao dia mampahery anay tokoa ny ezaka maharitra ataon'ny mpanoratra sy ny mpandika teny hitondra mandrakariva ny vaovao any amin'ny faritra miady, tratran'ny voina, ary any amin'ireo sehatra mitolona ho amin'ny fahalalaham-pitenenana.
Na dia fandraisana anjara kely aza dia efa ahafahana mandoa ny lany amin'ny fandanian'ny serasera (server), ny vola aloan'ny tonia isam-bolana, ary ekipa mpitarika kely ihany.
Ny fanampiana fanampiny dia ahafahanay havitrika amin'ny fandikana ny votoatin'ny lahatsoratra avoakanay ho amina fiteny mihoatra ny 15, sy manampy ihany koa teny hafa mba ho ampidirina, mba hananan'ny fampitam-baovao matihanina sy ny tsirairay manerantany mahazo loharanom-baovao isan-karazany avy amin'ny fampitam-baovaon’ olo-tsotra anatin'izao fotoana mampatahotra ny fakam-baovao sy ny fampitana azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izao.
Manomeza izao ho an'i Global Voices, ary ambarao (asehoy) ny fandraisana anjaranao amin'ny fanomezana vahana ireo tantara, sary sy lahatsary avy amin'olo-tsotra manerantany mampiasa ny aterineto hifandraisany amin'ny mponin'izao tontolo izao namany (ianao izany!).